Haddii aad Swiidhan ku cusubtihid, aadna khibrad ama waxbarasho u leedihid xirfad ay jirto baahi weyn oo shaqaale loo qabo, waxa loogu yeero xirfad baahi ka jirto, waxaad fursad u heli kartaa in aad suuqa shaqada u qaaddid waddo dhakhsi badan. Iyadoo leysku darayo ansaxin, tababar shaqo, tababar luqadeed iyo waxbarasho dhameystir ah oo la isugu kaa duway ayaad si dhakhsi ah shaqo u heli kartaa taasoo aqoontaadi iyo khibraddaadi hore aad ku isticmaali kartid.
Snabbspår waxaa soo gelaya ku dhawaad 40 xirfadood oo baahi ka jirto, sida tusaale ahaan:
Korontoyaqaan xagga adeegga iyo rakibidda
Wadaha baabuurrada xumulka
dhakhtar, kalkaaliso caafimaad, dhakhtar ilko, farmashiiste, farmashiiste
Macallin, macallin dugsi xannaano
Qalaa, kawaanle, rootile
Farsamo yaqaan xagga guryaha ah, waardiyaha guryaha, guryo kireeye
injineer dhismo, naqshadeeye
Korontoyaqaanka qeybiyaha, injineer
cilmi bulsho-yaqaan, oo uu ku jiro dhaqaalayahan, garyaqaan
xoghaye arrimo bulsho, qiimeeye kaalmo dhaqaale, la taliye arrimo bulsho
Kalkaalisada caafimaadka xayawaannada
faryaamo mashiin iyo hawl-geliyo mashiin, rakibaa, derbi warqado ku dhejiye, faryaamo alaab guri.
Waa annaga, shaqabixiyaha iyo ururrada shaqaalaha cidda wadajir ahaan uga heshiineyna shaqooyinka soo gelaya iyo waxa loo baahanayahay in waddada degdegga ah ay ku jiraan. Waxbarashadu wey kala dhaadheertahay iyadoo taasi ku xiran xirfadda ay waddada degdegga ahi khuseyso iyo waxyaabaha dhameystirka ah ee loo baahanyahay in la sameeyo.
Waddada degdegga ah waxaa loogu tala galay adigaaga waddanka ku cusub, khibradna u leh xirfad aad shaqaale loogu baahanyahay. Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaa xitaa lagaaga baahanyahay inaad buuxiso mid ka mid ah arrimahan:
Waxaad ka qeyb qaadataa etableringsprogrammet ama waqti ka mid ah 12 bilood ee la soo dhaafay aad ka qeyb qaadatay etableringsprogrammet.
Waxaad leedahay etableringsplan oo socda ama waxaad dhameysatay etableringsplan 12 bilood ee la soo dhaafay.
Waxaa laguu oggolaaday sharci degganaasho 3 sano ee la soo dhaafay.
Waxaad ka qeyb qaadataa barnaamijka damaanad qaadka shaqada iyo horumarka.
Adigaaga leh waxbarasho waxa khuseysa oo aad kala timid waddan ka baxsan Midowga Yurub ama waddamada EES, oo aan weli xirfaddaa kaga shaqeyn Iswiidhan gudeheeda, waa aad ka qaybqaadan karta haddii boos la heli karo.
Si wadajir ah ayaan adiga sawir kaagala qaadaneynaa khibradahaagi hore.
Waan kaa caawin karnaa turjumidda shahaaddooyinka iyo caddeymaha iyo in aad u diratid hey’ad sax ah si loo qiimeeyo.
Waxaan qiimeyneynaa haddii waddada degdegga ah ay kugu habboontahay.
Waxaan kaa caawineynaa in aad heshid waddada cusub iyo hawlo waxqabad oo kugu habboon.
Awoodahaaga xirfad- iyo aqooneed ayaa si rasmi ah loo aqoonsanayaa, waxaadna ku dhameystireysaa qeybaha kaa maqan.